Beer agrobiodiverse ah oo ku taal Chalapamba, Ecuador. Sumcada sawirka: Eduardo Peralta
By Tonya Allen, Andre Degenszajn, Melanie Schultz van Haegen
Qeybtan ayaa markii hore ka soo muuqatay Gudaha Philanthropy waxaana dib loogu daabacay halkan oggolaansho buuxda.
Ka waran haddii aan ku dabooli karno laba baahiyood oo caalami ah hal fal, sida baabi'inta gaajada iyo gaaritaanka qiiqa-eber? Waxaan awoodnaa, annaga oo qaadanayna isbeddellada nidaamyada cuntada. 23-ka Sebtember, hoggaamiyeyaasha ka socda waddamada adduunka ayaa shir isugu imaan doona markii ugu horreysay Shir -weynaha Nidaamyada Cuntada ee Qaramada Midoobay. Tani waa daqiiqad muhiim u ah iskeed, laakiin iyada oo Shirka Isbeddelka Cimilada ee Qaramada Midoobay toddobaadyo yar uun ka dib, waa suurtagal in wax laga beddelo. Kani waa fursad aan isugu nimid inaan la dagaallano saboolnimada, wanaajinno helitaanka cuntada iyo taageeridda bulshooyinka caafimaadka qaba, dhammaan inta aan wax ka qabaneyno isbeddelka cimilada iyo ka shaqeynta ilaalinta meeraheena.
Nidaamyada cuntada ee waara ayaa ah xalka cimilada ee muhiimka ah, hoos u dhigaya qiiqa gaasaska kulul ee cimilada diiriya sida methane iyo kaarboon laba ogsaydh. Ugu dambayn Warbixinta IPCC wuxuu ka digayaa inaan haysanno daaqad gaaban oo keliya si aan uga hortagno saamaynta “ugu daran” ee isbeddelka cimilada, oo ay ku jiraan cunto yari baaxad leh iyo burburinta nidaamyada beeraha oo dhan. Warbixinta IPCC ayaa sidoo kale ku cad xalka muhiimka ah: in la yareeyo qiiqa kaarboonka ee waxsoosaarka beeraha iyo cuntada, hadda.
Waxaa jira dibed -baxyo qoto dheer oo waxyeello u leh nidaamyada cuntada ee maanta oo ay tahay in wax laga qabto, gaar ahaan hab -dhaqanka beeraha warshadaha. Qiimayaashani waa buufin: cudurrada la xiriira cuntada, wasakheynta deegaanka, qiiqa kaarboon, iska caabinta jeermiska iyo cudurrada zoonotic sida COVID-19. A daraasad dhowaan ay samaysay Rockefeller Foundation waxay muujisay in cawaaqibka caafimaadka iyo cimilada ee nidaamka cuntada Ameerika uu saddex jeer ka badan yahay cuntada lafteeda - iyo in kharashyadu si aan kala go 'lahayn u culaysiiyaan bulshooyinka midabka leh. Tani waa run caalamka sidoo kale; kuwa ugu dhaqaalaha iyo juquraafi ahaan nugul waxay la kulmaan saamaynta ugu weyn.
“Waxaan leenahay awood aan ku qaabeyno mustaqbalka. Aan ku dhiirano ballanqaadyadayada oo aan sii wadno go'aankeenna inta aan ka wada shaqayno si aan wax uga beddelno habka dunidu wax u soo saarto, u isticmaasho iyo uga fikirto cuntada."
Habka ugu wanaagsan ee loola dagaallami karo kharashyadan sii kordhaya waa in la qaato nidaamyo cunto oo waara. Daraasiin daraasado kiis ah adduunka oo dhan ayaa muujinaya sida nidaamyada cuntada waara ay si guul leh wax uga qabtaan caqabado badan, sida bixinta cuntooyin nafaqo leh, abuurista cunto iyo biyo badbaado leh, hagaajinta caafimaadka deegaanka iyo xoolaha, iyo kobcinta fursad dhaqaale. Dhab ahaantii, isbeddelka nidaamyada cuntada ayaa ah habka ugu xawliga badan ee loo gudbiyo 17 -ka Qaramada Midoobay Yoolalka Horumarinta Joogtada ah.
Afrika iyo Koonfurta Ameerika, Machadka McKnight's Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada wuxuu isu keenaa beeraleyda, cilmi baarayaasha iyo ururada aan macaash doonka ahayn si ay u sameeyaan cilmi-baaris ku salaysan cilmiga beeraha iyo hormarinta dhaqannada sharafta xikmadda maxalliga ah isla markaana waddo u mara dib ugu noqoshada cuntada si fiican u koray ee kobcisa dadka iyo meeraha. Tusaale ahaan, beeraleyda iyo cilmi -baarayaasha ka wada -shaqeeya Degmada Nandi, Kenya, waxay heleen siyaabo ay isugu daraan digiraha badarka badan ee beeralayda yar -yar. Sababtoo ah dhexgalkan wadajirka ah ee beeralayda, beeralayda yar yar ma aha oo kaliya inay nafaqo siiyaan qoysaskooda iyo bulshooyinkooda, laakiin waxay hagaajiyeen wax soo saarka, caafimaadka ciidda oo hagaagay iyo hab -nololeedkooda oo hagaagay.
Guud ahaan Afrika, Aasiya, Yurub iyo Ameerika, the Sanduuqa AgroEcology, kaas oo Porticus iyo McKnight ay taageeraan, waxay isku ururinayaan kheyraadka si ay u taageeraan boqolaal urur oo hormuud u ah xallinta dariiqyada kala duwan sida kala -soocidda kaarboonka, bangiyada abuurka, iyo xeerarka isticmaalka dhulka iyo biyaha deegaanka.
Soo saaraha abuurka waalidka ee masagada ee Mali. Sumcada sawirka: Baloua Nebie
Kobcinta wax -soo -saarka soybean -ka Kenya. Sumcada sawirka: James Nyongesa
Dardarku waa halkaan. Tani waa sababta, annagoo ah maamuleyaal aasaasi ah oo ka kala socda saddex qaybood oo kala duwan oo adduunka ah, oo leh kala duwanaansho juqraafiyeed iyo dhaqan oo ka dhex jira deeq -bixiyeyaasheenna, waxaan ku maalgelinaynaa is -beddelka nidaamyada cuntada. Waa arrinta dhifka ah ee na siineysa fursad aan ku burburinno silos, iskaashi iyo ka shaqeynta dhaqdhaqaaqyada oo dhan. Taasi waa ta ka dhigaysa labada bilood ee soo socda mid wax tar leh.
Markaan u soo dhowaanno Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, Shir -weynaha Nidaamyada Cuntada ee Qaramada Midoobay (UNFSS), Shirka Isbeddelka Cimilada ee Qaramada Midoobay (COP26) iyo daqiiqado kale oo caalami ah sida Toddobaadka Cimilada iyo Heshiiska Kala -duwanaanshaha Kala -duwanaanshaha (COP15), waxaa jira saddex dariiqo oo looga faa'iidaysan karo daaqadan fursad.
Marka hore, waxaan ku boorineynaa hoggaamiyeyaasha inay mudnaanta koowaad siiyaan cilmiga beeraha iyo dhaqannada beeraha ee dib -u -soo -saarka beeraha caadiga ah. Waxaan sidoo kale ku boorineynaa inay qaataan hababka wax -ka -beddelka sida “xisaabinta kharashka dhabta ah”Taas oo u saamaxaysa go'aan-qaatayaasha inay xisaabiyaan kharashaadka qarsoon ee saamaynta nidaamyada cuntada. Muhiimad ahaan, waa inaan aragnaa ballanqaadyo geesinimo leh oo wax looga qabanayo sinnaan la'aanta qaabdhismeedka si xeeladaha aysan u yeelan cawaaqib aan la filayn, ama cidna looga tagin. Tan waxaa ka mid ah dib -u -hagaajinta kabitaannada waaweyn ee shirkadaha ee sii wada kobcinta beeraha warshadaha.
Midda labaad, waxaan ugu baaqeynaa deeq -bixiyeyaashayada kale, deeq -bixiyeyaasha dhinacyada badan leh iyo maalgashadayaasha inay u weeciyaan qulqulka maaliyadeed ee maal -gelinta oo ka fog dhaqammada waxyeellada leh iyo ku wajahan dadaallada dhiirrigelinta, dardargelinta iyo ballaarinta isbeddellada nidaamka cuntada.
Saddexaad, waxaan ku dhiirigelinaynaa asaaggeenna inay noqdaan horyaal aan cabsi lahayn oo matalaadda loo dhan yahay ee maalgelinta iyo go'aaminta dejinta miisaska caalamiga ah. Dadka aqlabiyadda adduunka, gaar ahaan bulshooyinka asaliga ah, waxay u baahan yihiin inay si fiican u matalaan, maaddaama ay haystaan qarniyaal xigmad ah oo ku saabsan dhulkooda iyo dhaqamadooda. Waxay leeyihiin wax badan oo ay na baraan sida loo dheelitiro baahida dadka iyo meeraha, haddii aan diyaar u nahay inaan dhegeysanno.
Waa inaan u isticmaalnaa aaladahayaga si aan u dhisno wacyigelinta dadaallada badan ee caalamiga ah ee durba keenaya nidaamyo cunto oo waara. Taasi waxay kobcin doontaa bakhaarrada sheekooyinka caqabad ku ah oo wiiqi kara sheekooyinka baahsan, ee waxyeellaynaya qaabaynta hababka cuntada ee maanta oo ku sii hayn doona qufulkooda.
Waxaan awood u leenahay inaan qaabeyno mustaqbalka. Aynu ku dhiirrano ballanqaadyadeennii oo aan ku adkaysanno go'aankeenna markaan wada shaqayno si aan u beddelno habka adduunku u soo saaro, u cuno oo uga fikiro cuntada.
Tonya Allen waa madaxweynaha McKnight Foundation; Andre Degenszajn waa agaasimaha fulinta ee Instituto Ibirapitanga; Melanie Schultz van Haegen waa maamulaha Porticus; dhammaantood waa xubno ka tirsan Isbahaysiga Caalamiga ah ee Mustaqbalka Cuntada.